Mareykanka oo diyaar u ah wadahadallo toos ah in lala galo Talibanka – Radio Muqdisho
Mareykanka ayaa diyaar u ah in uu ka qeybgalo wadahadallo waan-waan ah oo toos ah oo lala galo kooxda Taliban,si la isugu dayo dhameynta dagaalada daba dheeraaday ee 17-ka sano ka socda dalka Afghanistan,sida uu ku waramay sar kaal ka tirsan Mareykanka.
General John Nicholson oo ah taliyaha ciidamada Nato ee jooga dalkaasi, hadlayna maalinimadii shalay oo Isniin aheyd ayaa sheegay in Mareykanka uu door muhiim ah ka qaadan karo dadaalada dibolomaasiyadeed ee la doonayo in lagu soo dabbaallo Afghanistan.
“Waxaan tajeynayaa in kooxda Taliban ay garwaaqsato tallaabadaasi si loogu dhaqaaqo wadahadallo nabadeed oo horay loo sii riixo”ayuu yiri taliyahaasi.
Xog-haya Arimaha Dibadda Mr Mike Pompeo ayaa qaba in Mareykanku ay diyaar u yihiin wadahadallo ay Taliban kala yeeshaan doorka ciidamada caalamiga ah ee jooga Afghanistan.
Waxaa jira guux warar ku saabsasn suurtagalnimada in la gaari karo wadahadallo nabadeed,kadib markii bishii hore ee ay jirtay xabad-joojinta la arkay ciidamada ammaanka iyo kooxda Taliban oo iyagoo aan hub sidan ku wada sugan waddooyinka caasimadda Kabul iyo deegaanno kale.